zano repamutemo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: legal advice
Maternity capital yemwana wechitatu. Kubhadhara pakazvarwa kwemwana wechitatu
Nhasi, vabereki vazhinji vanofarira kuti sei, kunaani uye pasi pemamiriro api maternity capital inopihwa mwana wechitatu. Muchikamu chino, iwe uchawana ruzivo rwese rwaunoda. Pfungwa ye "maternity capital"? Nhasi…
Kudzoserwa kumusha chii? Ndiani anokodzera kudzoserwa kumusha uye zvinoitwa sei?
Munyika yezvematongerwo enyika uye bhizinesi, izwi rekuti "kudzosera kumusha" rinoshandiswa zvakanyanya. Mukureva uye izvi zvinowanzoitika muzvinangwa zvipi uye nechinangwa chei? Zvinoreva izwi rekuti "kudzosera kumusha" Mupfungwa yakajairika, "kudzoserwa kumusha ndiko kudzoka ...
Chii chinonzi mhuri yekurera? Chii chinonzi mhuri yekurera mundima yepamutemo?
Posted on 15.09.2019 21.09.2019
Nezvikonzero zvinoverengeka, nhasi vana vazhinji vanosiyiwa vasina tarisiro uye rudo rwevabereki. Vashandi vemumatumba vanoita zvese zvinoita kuti vadiki vanzwe vakachengeteka. Asi hapana anogona kutsiva amai nababa. ...
Mureza weIreland: Zviratidzo Zvekuchamhembe uye Maodzanyemba eChitsuwa
Ireland ndiyo nyika inorwira kodzero yekuwana rusununguko rwenyika yave ichienderera kwenguva yakareba. Iyo hurukuro yakasimba inoenderera nanhasi. Naizvozvo, mureza weIreland nezvimwe zviratidzo zvinogona kunyatso ...
Mirayiridzo kubasa. Hutano nekuchengeteka
Posted on 15.09.2019 16.09.2019
Kuchengeteka pabasa uye hutano hurongwa hwezvinodiwa uye matanho anotarisirwa kuchengetedza hutano nehupenyu hwevashandi vekambani. Inosanganisira kugadzirisa, kurapa nekudzivirira, zviri pamutemo, zvesangano nehunyanzvi, matanho ezvehupfumi pamwe nehupfumi. Poshi ...
Mureza weChina unotaridzika sei? China mureza kukosha
Posted on 15.09.2019 23.09.2019
Imwe yenyika dzekare zvakanyanya iChina. Zvinhu zvakawanda zvinoita senge zvakajairika nhasi zvinouya kubva munyika ino - sirika, pfuti nepepa, semuenzaniso. Vaive vekuChina avo, sekutaura kwevanyori venhau dzakaitika, vaive vekutanga kushandisa mureza ...
Kumanikidza ndiko ... Tsananguro, mhando uye zviyero zvekumanikidza
Kumanikidza rudzi rwekuda, uye kana munhu asingade kuita zvimwe zvinhu. Zviito zvakadaro zvinomanikidza vanhu kunguva dzisingadiwe kana kunyange dzisingagamuchirike kwavari vanogona ...
Maitiro asiri pamutemo ndedzipi nzira dzekutsanangudza maitiro asiri pamutemo
Hunhu husiri pamutemo zviito zvemunhu zvakadai semhosva inoitwa. Mune ino kesi, imwe mamiriro anofanira kuzadzikiswa. Kureva: munhu haasi kungoziva zvizere zviito zvake, asiwo ...
Maximum Simba reGweta
Posted on 15.09.2019 24.09.2019
Iko simba regweta nderei, ndinofunga, anenge munhu wese mukuru anoziva. Iri igwaro rinotsigira kodzero, semuenzaniso, yekufambisa manejimendi, kuve mumiriri mumasangano akasiyana siyana, kuita mamwe mabasa ane chekuita nebasa rezvinyorwa. Vamwe ...
Ruzivo rwekurapa rwechikoro chekutyaira
Nezve rudzii rwegwaro rinodiwa pachikoro chekutyaira, vavhoterwa mune ramangwana vatyairi vanozoziva kunyangwe kutanga kwekudzidzira. Ichi chinyorwa chekurapa. Chitupa chekurapa chechikoro chekutyaira chakakosha kutanga ...
Kusiya matama kunopinda here muchiitiko chebasa? Kutama kunosiya uye kuremerwa muRussia
Kuberekwa kwemwana ndicho chiitiko chakakosha kwazvo muhupenyu hwemukadzi wese. Kana iwe uine rombo rakaringana kuve nepamuviri, iwe unogona kunge uine mibvunzo yakawanda ine chekuita nebasa. Kunyanya, imwe yenyaya dzinopisa kwazvo ...
136 chinyorwa cheBazi Code yeRussian Federation nemhinduro
Mari chaiyo inobhadharwa kune vashandi inotsanangurwa mune zvakadzama muLabhodhi Code (kunyanya: chinyorwa 136). Uyu mubvunzo uzere nekusunga nuances. Mushandirwi anosungirwa kwete kungopa mari kuvashandi vake ...
Maitiro ekuwana vagari veRomania. Kuwana mugari weRomania: zvinyorwa, mutengo
Posted on 15.09.2019 17.10.2019
Pasipoti yemugari wemuRomania, hongu, inoshanda seyakanakisa chitubu kune avo vanoshuvira kuve mune imwe kana imwe nyika yeEurope. Romania, iri nhengo yeEuropean Union, inopa vagari vayo mukana wekupinda mavisa kune vese ...
Yekuchengetedza Moto Chinyorwa: Mitemo Yekutanga
Sezvinoratidzwa nenhamba, moto unobvira munyika medu maminetsi mashanu. Munhu mumwe anofa mumoto awa imwe neimwe, uye vanosvika makumi maviri vanowana kukuvara kwakakomba nekutsva. Chikonzero chikuru chemoto ...
Kukurudzira kuvengana kwemarudzi
Munguva yedu, pane zvakawanda zvekutaura nezvekukurudzira kuvengana kwemarudzi munyika uye nenyika dzoga dzoga. Maparamende eHurumende anoramba achigadzirisa yavo Criminal Code, ichiwedzera kuzvidavirira ...
Chii chinonzi mhosva? Mhando dzekufambiswa kwemhosva. Zvinangwa zvetsotsi
Chero nyika iri munyika imwe yemhando dzesangano renharaunda. Iine mabasa mazhinji ayo akakosha kwazvo munharaunda. Chimwe chezvakanyanya kuchengetedzwa kwenzanga, nyika uye wese mugari ...
Ndeipi fomu yehurumende mune yedemocracy republic? Pfungwa uye mhando, mienzaniso munharaunda yemazuva ano
Democracy ndiyo nzira yepamusoro yekusimudzira magariro. Sarudzo maererano nekugutsikana kwezvinhu zvakajairika uye zvido zvinoitwa nevanhu pachavo nenzira yeboka. Sosaiti yega ndiyo yega sosi yepamutemo yesimba. Vatungamiriri vanosarudzwa ne ...
Mienzaniso ye causation mumutemo wematsotsi
Zvinoenderana nemutemo weRussian Federation, kumisikidzwa kwehukama hwechisimba chinhu chinosungirwa mukuferefetwa kwemhosva. Icho chinongedzo pakati pezvimwe zviitiko kana mamiriro uye mhedzisiro mhedzisiro yechiito chisina kunaka kana kusiiwa. Zvakadaro…
Kutengesa imba yakaderera pane 3 makore euridzi. Kutenga nekutengesa dzimba. Kutengeswa kwemakamuri
Sezvaunoziva, mari kubva mukutengeswa kwemafurati nevanhu iri pasi pemutero wemunhu wega - wega mutero wemari. Kana uchitenga nekutengesa dzimba padunhu reRussian Federation, zviri mune zvese zviitiko zvakabhadharwa kuRussia ...
Shanda muFSB: maitiro ekugadziriswa?
Posted on 15.09.2019 25.09.2019
Iyo FSB, sesangano rinoita zvinopesana nehungwaru nemabasa ehungwaru, pamwe nekurwisa mhosva nehugandanga, zvavepo kwemakore gumi nemasere. Vagadziri vake vane mukurumbira - iyo Cheka, iyo NKVD, iyo KGB, kwaakabva iye ...
peji 1 peji 2 ... peji 150 Next Page
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,459 masekondi.